Bogga ugu weyn 17 Shaqooyin/Xirfadaha Dadka Jecel Socdaalka | 2022 La cusbooneysiiyay
Socdaalku wax badan buu bulshada u qabtaa inta aan ka ogaan karno. Xirfadaha loogu talagalay dadka jecel inay safraan ayaa ka caawin doona inay hubiyaan inay wax ka helaan bulshada inta ay le'eg tahay waayo -aragnimada safarku.
Mark Twain wuxuu yiri, "safarku wuxuu u dhintaa cuqdadda, eexda, iyo fikirka cidhiidhiga ah, dad badan oo dadkeenna ah ayaa aad ugu baahan xisaabaadkan."
Waxyaabaha aan u isticmaalin inay si lama filaan ah si lama filaan ah u bilaabaan inay muhiim noqdaan iyo kuwa run ahaantii aan muhiim ahayn laakiin hadda sameeya, bilaw inaysan muhiim ahayn.
Bulshadana waa in lagu dhiiri galiyaa sidaas. Tani ma sahlana laakiin waa la gaari karaa. Caalamiyeynta ayaa caawisay, laakiin weli waxaa jira wax badan oo la sameeyo marka loo eego ganacsiga iyo waddooyinka socdaalka oo furan.
Dadku waa inay maskaxdooda furtaan si ay u aqbalaan jihooyinka cusub, dadka cusub, dhaqamada cusub, iwm.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa shaqooyinka/xirfadaha loogu talagalay dadka jecel safarka iyo waxyaabaha kale ee la xiriira.
Safarku wuxuu ballaariyaa maskaxda. In kasta oo qaar ay ku fiican yihiin maskax aan faafin, qaarna ma aha. Safarku maaha ifafaale maanta bilaabmay.
Haddii aad diin leedahay markaa waa inaad la kulantay qisadii Ibraahim iyo sidii Ilaah u codsaday inuu safro.
Bilowgii 12: 1 ee Kitaabka Quduuska ah ayaa leh "Rabbigu wuxuu Aabraam ku yidhi, Ka tag waddankaaga, dadkaaga, iyo reerka aabbahaaba oo tag dhulka aan ku tusi doono."
Buugga kitaabiga ah ee Baxniintii, reer binu Israa'iil sidoo kale waxay ku qasbanaadeen inay safraan xilliga abaarta. Abaartaan darteed, awowgii Cibraaniga ahaa Yacquub wuxuu la safray qoyskiisii ​​ballaarnaa oo 70 ahaa Masar si ay labadooduba ugu noolaadaan xaalado wanaagsan oo ay ula joogaan wiilkiisa Yuusuf.
Yuusuf xikmaddiisii ​​aad bay u cajabisay Fircoonkii Masar ilaa heer waxaa loo magacaabay Ku -xigeenka Masar, oo ahaa kan labaad ee awoodda Fircoon oo keliya.
Waxay safreen oo socdeen boqollaal sano. Safarku wuxuu ka caawiyay inay wax badan bartaan.
Haddii aadan diin lahayn oo aadan u malayn in xisaabta diintu tirinayso, Roomaanku waxay u safri jireen madadaalo ahaan. Dadka Roomaaniyiinta ah ee hodanka ah badiyaa waxay aadi jireen guryahooda xagaaga. Waxayna u ahayd firaaqada.
Waxay, dabcan, bilaabi karaan inay taas sameeyaan maxaa yeelay waxay ikhtiraaceen wax aad muhiim ugu ah safarka - waddooyinka.
Shabakadaha waddooyinka oo aad u horumarsan ayaa sabab u ahaa inay si ammaan ah oo dhaqso leh u safraan. Mar walba waxaa jira wax laga barto iyo marka la safrayo.
Socdaalka dabiiciga ah
Socdaalku wuxuu muhiim u yahay jiritaanka aadanaha iyo noocyada kale - qaarkood waxay fuliyaan waxa loo yaqaan guuritaanka xilliyeedka.
Socdaalka xilliyeed sida ku qoran encyclopedia.com waxaa lagu tilmaamaa “dhaqaaqa shimbiraha, cayayaanka, iyo noocyada naasleyda kala duwan oo ka kala socda hal deegaan ilaa meel kale waqtiyada kala duwan ee sannadka.
Socdaalku waa lama huraan sababta oo ah isbedbedelka xilliyeed ee arrimo ay ka mid yihiin helitaanka cuntada, iftiinka qorraxda, iyo heerkulka hawada ama biyaha ayaa noqda mid aan loo dulqaadan karin hal deegaan, inta badan xilliga jiilaalka, taasoo ka dhigaysa taranka iyo xitaa badbaadada mid adag. ”
Socdaalku wuxuu noo furayaa annaga iyo kuwa kaleba adduun cusub. Xaqiiqda ah in ay jiraan wax ka badan adduunka annaga.
Waa maxay naxdinta dhaqanku?
ISN waxay qeexaysaa naxdinta dhaqanka sida “Naxdinta dhaqanku waxay tilmaamaysaa saamaynta ka guuritaanka dhaqan la yaqaan oo loo gudbo mid aan hore loo aqoon.
Saameyntan waxaa ka mid ah welwelka iyo dareenka (sida yaabka, wareerka, hubaal la’aanta, iyo jahawareerka) la dareemayo marka ay tahay in qofku la qabsado deegaan ama dhaqan kale oo aan la garanayn.
Waxaa ka mid noqon kara naxdinta deegaan cusub, la kulanka dad cusub, cunista cunto cusub, ama la qabsashada luqad shisheeye, iyo sidoo kale naxdinta inaad ka go'day dadka muhiimka u ah noloshaada: sida qoyska, saaxiibbada, saaxiibbada, iyo macallimiinta. ”
Mararka qaarkood inta aan safarka ku jirno, waxaa laga yaabaa inaan isku aragno meelo aan kula kulanno wax aan la aqoon, naxdin leh, iyo wax aan macquul ahayn.
Bal qiyaas inaad naftaada ka hesho Magaalada New York oo aan garanayn wax la sameeyo.
Baro wax ku saabsan Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Ka dib markaan la kulanno qaar ka mid ah waxyaabahan, waxaan barannaa qaybo ka mid ah nafteena oo aanan haddii kale ogaan lahayn inay maqan tahay oo laga yaabee inay horumarsan tahay.
Muxuu safar kuu samayn karaa?
Socdaalku wuxuu ina baraa nolosha. Marka laga reebo faa'iidooyinka nafsiyeed iyo dhaqameed ee socdaalka, si cilmiyeysan, safarka ayaa siyaabo dhowr ah u caawiya.
Socdaalku wuxuu caawiyaa inuu yareeyo halista cudurka wadnaha, wuxuu caawiyaa yareynta walwalka. Socdaalku wuxuu kor u qaadaa dhaqdhaqaaqa jirka, wuxuuna kor u qaadaa hal -abuurka, sidoo kale wuu kaa farxiyaa.
Haddii aadan hore u safrin, u oggolow naftaada inaad la kulanto waxyaalaha waaweyn ee socdaalku ku siin karo.
17 shaqooyin ama xirfado loogu talagalay dadka jecel inay safraan
"Si aad u guurto, u neefsato, u duusho, u sabbayso - Hans Christian Andersen
#1 - Shaqaalaha markabka markabka
Shaqaalaha markabka markabka ayaa adeegyo siiya rakaabka saaran maraakiibta dalxiiska. Ka sokow caawinta hawlgalka markabka, waxaa laga yaabaa inay u adeegaan cunto iyo cabitaan, ilaaliyaan cabbitaannada iyo goobaha dadweynaha, hoggaamiyaan hawlaha doonnida, iyo inay bixiyaan madadaalo.
Waxaa jira 77,260 shaqaale gaadiid biyo ah, iyo in ka badan 339,150 shaqaale madadaalo, oo ay ku jiraan shaqaalaha markabka dalxiiska, oo ka shaqeeya Maraykanka.
#2 - Hagaha Dalxiis
Hagaha Dalxiiska wuxuu siiyaa shirkad iyo macluumaad shaqsiyaadka ama kooxaha socotada ah. Waa aqoon iyo garaad leh meelaha ay tusaan dalxiisayaasha.
Safarrada ay ku jiraan daawashada dhismayaasha taariikhiga ah, goobaha, iyo goobaha, Hagaha Dalxiiska waa inay awoodaan inay siiyaan dadka socotada ah dhammaan macluumaadka ay tahay inay ka ogaadaan goobta ay booqanayaan.
#3 - NGO-yada
Qaarkood waxay doorbidaan inay u shaqeeyaan urur gacan ka geysanaya sidii dunidu u noqon lahayd meel wanaagsan iyada oo la samaynayo cilmi -baaris, waxbarasho, firfircooni, iyo shaqooyin kale.
Haddii tani ay ku sifeyneyso, xirfadda urur aan dowli ahayn, oo sidoo kale loo yaqaan NGO, laga yaabee inay habboon tahay.
In kasta oo ururada samafalka ahi aysan u shaqayn macaash, waxaad halkaas ka heli doontaa shaqooyin badan oo isku mid ah oo aad ka heli doonto qaybta macaash doonka. Maadaama uu yahay qof jecel inuu safro, ku -xidhnaantu dhib ma noqon doonto.
#4 - Kalkaalisada safarka
Kalkaaliyeyaasha safarka waa kalkaaliyeyaal diiwaangashan oo ka shaqeeya kaalmo waqti-gaaban ah isbitaalada, rugaha caafimaadka, iyo tas-hiilaadka kale ee daryeelka caafimaadka adduunka.
Kalkaaliyeyaasha safarka ayaa gacan ka geysanaya buuxinta meelaha bannaan ee meelaha ay ka jirto kalkaaliso yaraanta. Waxay u shaqeeyaan hay'ad shaqaale kalkaaliye madaxbannaan halkii ay ka ahaan lahayd hal isbitaal.
Waddo -waduhu wuxuu caawiyaa fannaaniinta inta ay dalxiiska ku jiraan isagoo dejinaya oo kala furfuraya qalabka, raacaya baabuurka, iyo laga yaabee inuu ka kaxeeyo gig ilaa gig.
Magacyada kale ee loo yaqaan 'roadie' waxaa ka mid ah shaqaalaha gadaasha ama shaqaalaha waddada.
#6 - Wakiilka iibka
Wakiilka iibku waa qof soo bandhiga oo ka iibiya badeecad ama badeecado ganacsiyada, ururada, iyo hay'adaha dawladda, halkii uu toos uga iibin lahaa macaamiisha.
Wakiilada iibku waxay muhiim u yihiin soo -saarayaasha iyo jumladaha, maadaama ay yihiin kuwa kor u qaada oo suuq geeya badeecadaha.
#7 - Qorista safarka
Dadka wax ku qora blog -ga ayaa ah dad safraya ka dibna ku dhejinaya waayo -aragnimadooda baloogyadooda si ay ula xiriiraan dadka jeclaan lahaa inay maqlaan khibradooda.
#8 - Kaaliyaha duulista
Shaqaalaha diyaaraddu waa qof ay waajibkiisa koowaad tahay inuu hubiyo badbaadada iyo raaxada rakaabka inta lagu jiro duulimaadka diyaaradda.
Waxay qayb ka yihiin shaqaalaha diyaaradda ee diyaaradda, koox shaqaale ah oo ka shaqeeya diyaarad ganacsi, ganacsi, ama xitaa milateri inta ay ku safrayaan gudaha ama dibadda.
#9 - Wakiilka Safarka
Doorka wakiilka socdaalka ayaa ah inuu ka caawiyo dadka inay qorsheeyaan, doortaan, iyo inay diyaariyaan fasaxooda. Waxay sida caadiga ah ku shaqayn doonaan miisaaniyad ay dejisay cid kasta oo qorshaynaysa fasaxa.
Waxay kaloo bixiyaan talooyin iyo fikrado ku saabsan halka loo aado iyo meelaha dalxiiska, dhacdooyinka, iyo caadooyinka.
#10 - Wakiilka adeega Macaamiisha
Wakiilada adeegga macmiilka ayaa ka jawaaba su'aalaha waxayna xalliyaan dhibaatooyinka.
Marka macmiilku soo waco oo ay haysato arrin u baahan in wax laga qabto, wakiil ayaa badiyaa furi doona macaamilka nidaamka kombiyuutarka shirkadda.
Wakiiladu waxay u isticmaalaan macluumaadkan si ay u xalliyaan dhibaatooyinka waxaana laga yaabaa inay sidoo kale isbeddel ku sameeyaan xisaabaadka macmiilka, sida inay cusboonaysiiyaan cinwaanka ku jira faylka ama joojiyaan amar.
#11 - Sarkaalka arimaha dibada
Saraakiisha adeegga shisheeye waxay matalaan dowladda iyo dadka Mareykanka iyagoo xiriir la sameeya waddamada shisheeye iyo ururada caalamiga ah.
Waxay kor u qaadaan oo ilaaliyaan danaha siyaasadeed, dhaqaale, iyo ganacsi ee Mareykanka ee dibedda.
#12 - Consultant
La -tashigu waa meheradda siinta talo khabiir koox gaar ah oo dad ah. Haddaba maxay sameeyaan la -taliyayaashu? Macno ahaan, waxay ku taliyaan.
Waxay ka soo jiidaan waayo-aragnimadooda niche, fahamka warshadaha, iyo kartida xallinta dhibaatooyinka si ay u siiyaan talo qiimo leh macmiil ama koox dad ah.
#13 - Macalin Ingiriis
Macallinka Ingiriisku wuxuu mas'uul ka yahay hubinta in ardaydu bartaan naxwaha habboon, qorista, iyo fahamka akhriska.
Waxay mas'uul ka yihiin inay abuuraan qorshayaal cashar oo ardayda bari doona xirfadaha ay u baahan yihiin. Qaar ka mid ah magacyada shaqada ee macallinka Ingiriisku ku kori karo waa maamule iyo ku-xigeen.
#14 - Xiriirka dadweynaha
Khabiir ku xeel dheer xidhiidhka dadweynaha waa qof abuura oo ilaaliya sumcadda wanaagsan ee loo -shaqeeyaha ama macmiilka.
Waxay wax u qoraan sii -deynta warbaahinta, waxay qorsheeyaan oo toos u toosiyaan barnaamijyada xiriirka dadweynaha, waxayna lacag u ururiyaan ururradooda.
Duuliyayaal xirfadlayaal ah ayaa duulaya oo maraya diyaaradaha, helikobtarrada, iyo noocyada kale ee diyaaradaha. Waa inaad jeceshahay inaad safarto.
Duuliyayaasha diyaaraduhu waxay u shaqeeyaan shirkado gaar ah, iyagoo dadka iyo xamuulka ku qaada jadwallo go'an, halka duuliyeyaasha ganacsiga ay u shaqeeyaan shirkadaha bixiya duulimaadyada kirada ah, hawlgallada samatabbixinta, ama sawir qaadista hawada.
#16 - Turjubaankaeter / Turjumaanada
Turjumaanku waa qof erayga qoran ka beddela luuqad kale. Dhinaca kale, turjumaanku waa qof af ahaan ama turjumaad luqadda dhegoolaha ku turjuma.
#17 - Howlwadeen
Missionaries waa dad ka shaqeeya goobo ay adag tahay in laga helo caawimo. Waxaa lagu meeleyn karaa Afrika, Bariga Yurub, ama xitaa halkan Mareykanka meelaha, sida Appalachia.
Barta gunnada - Archeologist
Cilmi -baadhayaasha qadiimiga ahi waxay darsaan asalka, horumarka, iyo hab -dhaqanka aadanaha iyo bulshooyinkooda, hore iyo imminkaba.
Waxay baaraan dhaqamada, luqadaha, dabeecadaha, haraadiga qadiimiga ah, iyo astaamaha jirka ee dadka meelo badan oo adduunka ah. Waxay weydiiyaan su'aalo waxayna horumariyaan aragtiyo.
Socdaalka ayaa laga yaabaa inuusan ahayn waxa kaliya ee loo baahan yahay si loogu guuleysto xirfadahaan, laakiin waxay hubaal tahay inay fududeynayso marin -u -helka iyo raaxaysiga.
Kuwa jecel inay safraan waxay yaqaanaan muhiimada ay leedahay kaqaybqaadashada iyo kaqaybgalka inta ay socdaan. Dhibtu waxay tahay inaad doorbido inaad lacagtaada ku safarto intii aad ku bixin lahayd waxyaabo maadi ah.
Socdaalku mararka qaarkood wuxuu sameeyaa farqiga.
Xigashooyinka Jack Ma ee Awooda iyo Dhiirrigelinta leh ee Mar walba | 50
Ardayda kuleejka maanta waxay haystaan ​​cadaadis aad uga badan kuwii hore. Iyagu kuma mashquulaan kaliya iskuulka laakiin…
Shaqooyinka Bixiya $20 Saacadii Shahaado La'aan 2022| Codso Hadda
Waxaad mooddaa inaad ka mid tahay kuwa mar weydiiyey su'aasha: "ma heli karaa shaqo...